1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module
1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module သည်မြန်ဆန်စွာ InGaAs PIN Monitor Photodiode နှင့် Single Mode pigtail connection များပါ ၀ င်သော coaxial type package တစ်ခုထဲတွင်သေးငယ်သော coaxial အမျိုးအစားအထုပ်ထဲတွင် CWDM 1490nm InGaAsP / InP DFB လေဆာ Diode module ဖြစ်သည်
၁၄၉၀nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ၏အကျဉ်းချုပ်
1490nm CWDM DFB Pigtail လေဆာ Diode Module ၏နိဒါန်း
1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
1490nm DFB လေဆာ diode;
4. 1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ကိုအသုံးပြုခြင်း
1490nm CWDM DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည် Diode Module ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â 'ƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1480 1490 1500 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၏ 1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ၏
၇။ ၁၄၉၀nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: 1490nm CWDM DFB Pigtail Laser Diode Module၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံလုပ်, စျေးပေါ၊